Mutengo wemafuta wave kukwidzwa pasvondo roga roga.
Sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wakwidzwa zvakare kutanga munyika yose.
Semuenzaniso, peturu muHarare yakwira kubva paRTGS$ 9.12 kuenda paRTGS$10.01 parita, dhiziri richikwirawo kubva paRTGS$9.36 kuenda paRTGS$10.32 parita.
Asi mitengo iyi yakasiyana nemitengo yekuBulawayo sezvo rita repeturu rave kutengeswa nemari inoita $RTGS10.39, kuchitiwo dhiziri richiita $RTGS10.69 parita.
Mitengo yekuVictoria Falls ndiyo inenge iri pamusorosoro munyika yose sezvo rita redhiziri rakwidzwa kuenda paRTGS$10.86 parita, kuchitiwo peturu yave kuita RTGS$10.56 parita.
ZERA yazivisa kuti mitengo iyi yasiyaniswa pachitariswa mutengo wekusvitsa mafuta aya kunzvimbo dzakasiyanasiyana idzi.
Vemichovha inotakura veruzhinji vanoti mitengo iyi ichavaomesera zvikuru sezvo ivo vachamanikidzwa kukwidzawo mari dzinoripirwa nevanhu vanenge vachifamba zvichienderana nekuti vanenge vachienda kunzvimbo dzipi.
Munyori anoona nezvemabasa musangano revemichovha reGreater Harare Association of Commuter Omnibus Operators, VaCaleb Dominic Bepeta, vanoti chiri kunetsa ndechekuti mitengo iri kungokwira asi mihoro yevanhu vavanotakura isina kwairi kuenda.
Hurukuro naVaCaleb Dominic Bepeta